Alokhu egeleze njalo amazwi enduduzo ngokudlula kwaMasekela | News24
Alokhu egeleze njalo amazwi enduduzo ngokudlula kwaMasekela
Cape Town - UMengameli Jacob Zum usedlulise amazwi enduduzo emndenini wakwaMasekela ngokudlula emhlabeni kwenkakha yomculo weJazz, ebesiyisishoshovu samasiko neqhawe lomzabalazo, uHugh Masekela.
Lesi sihlabani somculo weJazz eNingizimu Afrika uHugh Masekela sidlule emhlabeni kulandela ukuxinwa wukugula isikhathi eside.
Lo mculi udlule emhlabeni enemiyaka engu-78 ubudala. Lesi sihlabani sathola ukuthi sinesifo somdlavuza ngo-2008.
Ngo-Okthoba waqala wakhansela izindawo abezobnandisa kuzo njengoba ukugula kwakhe besekumxina kakhulu.
Khonamanjalo iMeya yaseGoli, uHerman Mashaba ikhiphe isitatimende idlulisa amazwi enduduzo emndenini, izihlobo nakubangani balesi sihlabani kulesi sikhathi esinzima obhekene naso.